Odayaasha ku sugan Cadaado oo kalsoonida kala noqdeen guddiga Farsamada maamul sameynta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Odayaasha ku sugan Cadaado oo kalsoonida kala noqdeen guddiga Farsamada maamul sameynta
A warsame 29 April 2015 29 April 2015
Mareeg.com: Odayaasha dhaqanka ee Shirka Cadaado ayaa kala diray Guddidii Farsmada ka dib markii ay ku eedeeyeen inay diideen inay ergada ku daraan Xubno ka socday Gobolka Mudug oo markii hore maqnaa.
Odayaasha Dhaqanku waxay ku doodeen in Maamulka Gobollada Dhexe uu ka koobnaanayo laba gobol oo dhamaystiran oo kala ah Mudug iyo Galguduud.
Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ka mid ah madax dhaqameedka shirka Cadaado oo arrintan VOA uga warramay ayaa sheegay in iyaga saxiixayaasha ay isku raaceen in guddigaas la kala diro.
Wuxuu sheegay Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed in guddigaasi yihiin kuwa aan ka shaqeyneyn iney maamul helaan Mudug iyo Galgaduud, sidaas darteedna ay kalsoonida kala laabteen, ayna kala direen.
Wuxuu sheegay Suldaanku iney dhisan doonaan guddi kale oo ay soo magacaabeen dadka ku nool gobollada Mudug iyo Galgaduud, ayna dowlada Soomaaliya u ogolyihiin iney qaab fasramo shirka ka taageerto.
Suldaanka ayaa sheegay in ergooyin ka socda degmooyinka ka tirsan gobolka Mudug oo hoos yimaada Puntland ay joogaan shirka, ayna qeyn ka noqon doonaa maamulka Mudug iyo Galgaduud.
Kala dirista guddigaan ayaa la sheegay iney wax ka ogyihiin maamulladii horay u jiray ee kala ahaa Galmudug, Ximan iyo Xeeb iyo Ahllsuna Waljamaaca.
Guddiga farsamada ee maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud ayaa waxaa dhisay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Axmed Madoobe iyo Shariif Xasan oo gaaray Garowe
Jaamacadda City oo arday usoo bandhigtay adeegeeda waxbarasho (Sawirro)